Matag iyo Shuban
Sababaha ugu badan ee matagga iyo / ama shubanku waa infekshannada fayraska, infekshannada bakteeriyada, sida sumowga cuntada, ama dhibaatooyinka soo raaca ee daawooyinka. Haweenka qaarkood ayaa sidoo kale la kulmi kara matag inta lagu jiro uurka, badiyaa lama socdo shuban.
Dhibaatada ugu daran ee matagga iyo shubanka waa fuuqbaxa dheecaannada luma ama awood la'aanta inay hoos u dhigto dareerayaasha. Calaamadaha fuuqbaxa waxaa ka mid ah daciifnimo, wareer, af qalalan, iyo kaadi yaraan. Dheecaannada IV ayaa loo baahan karaa haddii fuuqbaxu daran yahay. Cudurada faayrasku badanaa waa kuwa isxukuma waxayna xalin doonaan maalmo yar gudahood, laakiin raacitaanka talooyinkaan waxay yareyn doonaan halista fuuqbaxa.
Inta lagu jiro maalinta koowaad ee jirrada, ku xaddid cuntadaada cabitaanno nadiif ah. Dareerayaasha cad ee ugu caansan waxaa ka mid ah:
casiir cad (tufaax, karamberriga, canab)
soodhaha cad (sida 7-Up)
shaaha geedaha (ma leh kafeyn) sonkor ama malab
Hubso inaad cabto qadar yar (l-2 wiqiyadood) 15-30 daqiiqo kasta.
24 saac kadib, waxaad si tartiib tartiib ah u kordhin kartaa cuntadaada markii aad ladnaato. Ka bilow cunnooyinka jilicsan sida mooska, bariiska ama dalagyada kale ee la kariyey, baradhada caadiga ah, rootiga ama rootiga ama buskudka, tufaaxa tufaaxa ah ama khudradda qasacadaysan, kuna sii wad dheecaanno cad
KA fogow dhammaan waxyaabaha caanaha laga sameeyo, miraha liinta ama casiirka, aalkolada, cuntada basbaaska leh ama xilliyada la kariyey, shukulaatada, iyo khudradda gaaska soo saarta, ie. kaabash, kaabul, broccoli, iyo digir ilaa aad gebi ahaanba ka roon tahay.
24-48 saacadood ka dib markaad cuneyso cunnooyinka xun, waxaad dib u bilaabi kartaa cuntada caadiga ah.
Mararka qaarkood daawo ayaa loo baahan yahay lallabbo / matag haddii aadan awoodin inaad hoos u dhigtid wax cabitaanno ah oo saafi ah.
Daawadu badanaa uma baahna shuban biyood waxayna kordhin kartaa calaamadaha, laakiin wac xafiiska haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid astaamaha iyo baahida daawooyinka.
Dr. Alexandra Schueler Dr. Erika Boothman Dr. Carrie Soder Dr. Lauren Sagaria Dr. Amy W. Rahl Dr. Ann Marie Wurst Dr. Joanna Buell Dr. Kevin Hackett Goobta Westerville Goobta Columbus Goobta Dublin Cabashooyinka Guud Guudmarka Uurka